राम्री छु भन्ने घण्डका कारण पतिनले छाड्छन् घर, यि सुन्दरी बिमला पनि हप्ता दिनदेखि छिन् बेखबर, पतिको अवस्था बन्यो बेहाल – Gazabkonews
राम्री छु भन्ने घण्डका कारण पतिनले छाड्छन् घर, यि सुन्दरी बिमला पनि हप्ता दिनदेखि छिन् बेखबर, पतिको अवस्था बन्यो बेहाल
महिला हराएको सूचना ! कृपया सक्दो सेयर गरिदिनुहोला ! धनकुटा महालक्ष्मी नगरपालिका-७ जितपुर निवासी बिमला भनिने सरस्वती (कार्कि) अधिकारी हराएको मिति २०७७ पुष ३ गते शुक्रबार देखि परिवार सँग सम्पर्क बिहिन भएकाे हुँदा देख्नु हुने मानुभावले नजिकैकाे प्रहरी कार्यलय वा निम्न माेवाईल नम्बरमा जानकारी गराईदिनुहुन अनुराेध गर्दछु ।
जितपुर प्रहरी कार्यलयकाे सम्पर्क नम्बर-९८५२०७०१०५ / अथवा ९८०४०११६७९ मा कल गर्नु हाेला। सबैले एक एक सेयर गर्दिनुनुहाेला ।।
प्रयांक गर्न गएका यी युवाको भयो रा,मधु,लाई , हेर्नुस प्र्यांक गरेको भन्दा पनि जंगी बाबाले छोडेनन्, हेर्नुहोस् भाइरल भिडियो
झापा। मृतुन्जय अघोरी बाबा अहिले विभिन्न सामाजिक संजाल लगायत सोसल मिडियामा भाइरल भैरहेको बेला फेरी मोरंगमा १ जना जंगी बाबा नाम गरेका बाबा देखा परेका छन् । आफ्नो नाम जंगी बाबा बताउने बाबा २५ बर्षको उमेर बाट घर छोडेको बताएका छन् । अघोर बाबाको जस्तै उनि पनि बोल्नमा धेरै खुलेर बोल्ने बाबा रहेछन । उनले खुलेर आफ्नो प्रेम र से,क्सको बारेमा आफ्नो बिचार राखेका छन् ।मोरंगको उर्लाबारीमा उनि अहिले बस्दै आएका छन् ।
अघोर बाबाको बारेमा र बम्जनको बारेमा उनले खुलेर आफ्नो विचार राखेका छन् । बाबा धेरै प्रकारका भए पनि बाबाको कर्म गर्ने कम छन् भन्दै उनले आफु योग सम्बन्धि राम्रो बाबा भन्दै दाबि गरेका छन् । उनि मोरंगको उर्लाबारीमा भर्खरै आएर बसेको बताएका छन् । जंगी बाबालाइ लामो समय पछि हामी भेट्न जाँदा प्र्यांक गर्ने योजना गरेका थियौ। प्र्यांक गर्नलाइ साथी आइन्द्र गएपछि अचानक जंगी बाबाको आक्रोश यो भिडियोमा देख्न सकिन्छ , हेर्नुहोला ।